Maitiro ekudhawunirodha Cydia uye nekuisa yazvino vhezheni pane chero iPhone | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | Cydia, Jailbreak, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kana iwe uri mutsva kuIOS uye iyo jailbreak, zvingangove kuti iwe hauzive kuti chii icho "Cydia" chiri pamuromo wese. Asi chii chavari kutaura nezvacho? Pasina mubvunzo, patinonzwa kana kuverenga izwi rekuti Cydia mune imwe svikiro, iyo hurukuro ine hukama nenyika yepasirongo, iyo yakashandurwa muchiSpanish chimwe chinhu senge "kupukunyuka" kana, kana isu tichidudzira iyo zvakananga, "pwanya keji". Asi,maitirwo ezvekudhara cydia? Unoisa sei?
Muchikamu chino tichaedza tsanangura zvakasiyana siyana nezveCydia kuitira kuti iwe usambove nekusahadzika pamusoro pechitoro cheapp chakatangwa naSaurik ikozvino anodarika makore masere apfuura.
1 Chii chinonzi Cydia uye ndechei
2 Maitiro ekudhawunirodha Cydia ye iPhone 4 uye apfuura
3 Inoenderana Models
4 Dzidziso yekuisa Cydia
4.1 Maitiro 1: Kuisirwa kwakajairwa. Inodikanwa maitiro kana usati wambopunzika pamberi
4.2 Maitiro 2: Kuisirwa manyore.
5 Maitiro ekuita jailbreak matsva iPhone mamodheru
Chii chinonzi Cydia uye ndechei
Apple yakaburitsa chitoro chayo chekushandisa muKeynote yeWWDC muna2008 ndokuchimisikidza iyo App Store, iyo inoshandurwa yakananga kuti "chitoro chekushandisa" (iyo inoita kunge isiri seChirungu). Kurambidzwa kweIOS kwakaita kuti vagadziri vade "kutyora keji" iyo yakadzivirira kumwe kugadziridzwa kune iyo iPhone. Saurik akabva afunga kuvhura a imwe nzira chitoro kubva kwataigona kurodha pasi maapplication asina kubvumidzwa muApp Store uye nedzimwe mhando dzekushandurwa, senge SBSettings (pakutanga yainzi BossPrefs) kana Winterboard, iyo inotibatsira kuwedzera madingindira (makanda kana matehwe) kune yedu iPhone.
Infographic: chii chinonzi jailbreak uye ndechei?
Handisi kuzotaura izvozvo jailbreak ishoma uye haina kukosha, asi ini ndichati pakutanga iOS yaive nezvakawanda zvaisakwanisika, saka kuputsika kwejeri kwakangoita kunge chisungo. Pasina kuenda kumberi, kuti ukwanise kurekodha vhidhiyo neiyo yekutanga iPhone zvaive zvakakodzera kuisa a tweak naCydia. Pasina kumwe kunonoka, ngatione maitiro ekuodha pasi Cydia uye nekuiisa pane akasiyana iPhone kana iPad mamodheru.
Maitiro ekudhawunirodha Cydia ye iPhone 4 uye apfuura
Zvakanakisa zve dhawunirodha uye gadza Cydia pane iPhone 4 uye zvisati zvaitika kutsvaga chishandiso chakakodzera cheiyo vhezheni yeIOS iyo chishandiso ichi chinoshandisa:
Kana uine iOS 7.x yakaiswa, uchafanirwa kuenda kuwebsite yePangu uye kurodha pasi chishandiso chavo Pangu 7.
Kana iwe ukaitika kuve uine iOS 7.0-7.0.x uye iwe usingavimbe neChinese hackers (haungave wekutanga), unogona zvakare kushandisa chazvino chishandiso chakatangwa nechikwata chevabiridzi evad3rs chauinacho pawebhusaiti yavo .
Kana iwe ukaita sarudzo isingarambike yekugara paIOS 6, unogona kushandisa chishandiso p0sixspwn.
Kune mamwe maBhaibheri, tarisa peji http://jailbrea.kr/
Inogona zvakare kuyedzwa uye kuiswa Cydia Installer, chishandiso cheWindows icho chinofanirwa kurodha pasi Cydia. Chero zvazvingaitika, icho chinhu chandisingakurudzire.
Mhinduro inokurumidza ndeiyi: zvese. Chero mudziyo weIOS, ingave iri iPhone, iPod Touch kana iPad, inoenderana neCydia. Ehezve, haazi ese marongedzero anoenderana neshanduro dzese dzeCydia.
Chero zvazvingaitika, kana isu tikaputsika mujeri iPhone, iPod Touch kana iPad, tichipinda Cydia tichaona kana zvichigona kuitwa gadziridza kune yazvino vhezheni. Kana isingakwanise, yazvino vhezheni yatinokwanisa kuisa kubva kuCydia ndiyo yekupedzisira inoenderana neiyo mudziyo.
Dzidziso yekuisa Cydia
Maitiro aya anogona kunge ari anonyengera kana akareruka, zvichienderana nemaitiro aunosarudza uye panguva yaunoda kuisa Cydia
Maitiro 1: Kuisirwa kwakajairwa. Inodikanwa maitiro kana usati wambopunzika pamberi
Iyi ndiyo nzira yakakurudzirwa yekuisa Cydia pane yako iPhone.
Kana iwe usina imwe Cydia yekushandisa chitoro yakaiswa, inokupa matambudziko kana ikanyangarika, pamwe zviri nani kutanga kubva ku0, saka chinhu chekutanga chatichaita kuchengetedza.
Nhanho yechipiri ndeyekutarisa kune imwe yedzidziso yatinayo muApple News kune jailbreak kifaa chako.
Zvakareruka sekudaro. Kunyangwe zvingave zvakanaka, kuisirwa manyoreji kwemamwe mapakeji kazhinji kunogadzira matambudziko akawanda pane kuagadzirisa, saka ini ndinokurudzira kuita Maitiro 1 kuisa Cydia. Zvakare, ndiyo chete nzira yekuisa kana isu tisati tavhunza mudziyo izvozvi.
Maitiro 2: Kuisirwa manyore.
Ini handikurudzire maitiro aya kuisa Cydia, asi zvinotitadzisa kutanga kubva pa0 nezvose izvi zvaizoreva. Tichaita zvinotevera:
Tinodhawunirodha iyo .deb package yeiyo vhezheni yeCydia iyo yatinoda kuisa.
Isu tinovhura SFTP mutengi, saCyberduck.
Tinoenda nechikepe / var / mudzi / Media. Kana isu tisina iyo Cydia dhairekitori, tinogadzira iyo.
Mukati meCydia dhairekitori isu tinofanirwa kugadzira (kana zvisiri) dhairekita inonzi AutoInstall.
Isu tinotora iyo .deb package yatakatora padanho rekutanga uye "yoisa" kune iyo AutoInstall dhairekitori.
Takadzorerazve ruviri. Mushure mekutanga kwechipiri, Cydia inofanirwa kuoneka paChitubu.
Maitiro ekuita jailbreak matsva iPhone mamodheru
Iwo mapoka evavhavha ayo ane basa rekugadzira iyo jailbreak zvakare vane basa rekutanga zvishandiso nezvazvo. Zvikasadaro, kutyora kwejeri kunogona kuve basa risingakwanise. Kana iwe ukandibvunza "Unoita sei jailbreak iPhone, iPod Touch kana iPad?" mhinduro yangu ingave "Ndeipi mudziyo uye ndeipi vhezheni yeIOS yawakaisa?"
Kunyangwe chiri chokwadi kuti maturusi azvino uno anoita maitiro acho zvakafanana, ichokwadi zvakare kuti panogona kuve nechiedza asi misiyano yakakosha mukuita. Kana ndichifanira kutaura imwechete generic nzira, ini ndingati inofanirwa kuitwa seinotevera:
Isu tinotsvaga ruzivo nezve jailbreak yeiyo iOS vhezheni izvo zvatakaisa. Pfungwa iyi inogona kusetsa, asi ndinozvitaura nekuti, semuenzaniso, muIOS 5.0.1-5.1.1 isu tinofanirwa kushandisa iyo Absinthe chishandiso, muIOS 6.1.2 isu tinofanirwa kushandisa evasi0n, muIOS 7.x evasi0n7 uye yeIOS 8 uye iOS 9 isu tichafanirwa kushandisa chimwe chishandiso chinopihwa nePangu kana TaiG hacker zvikwata. Mune peji maboss.kr Tinogona kutarisa ruzivo urwu kusvika kuIOS 7.1.
Isu tinoita backup ye data rese rakakosha pa iPhone, iPod Touch kana iPad Iri idanho rakakosha rekuti isu tichaitei chero kupenya, kwete chete kweiyo jailbreak.
Isu tinomhanya chishandiso chakaburitswa mudanho 1.
Isu tinoteedzera rairo dzinoonekwa mukushandisa. Muzviitiko zvakawanda, nhanho idzi dzinosanganisira kuvhura chishandiso uye nekukanda iyo icon nyowani iyo yakave yakaitwa pane inotenderera.
Nei Jailbreak isisiri kunakidza?
Para kuputswa kwetirongo kune yazvino vhezheni inowanikwa panguva ino, unogona kushanyira yedu posvo Dzidziso kune jailbreak iOS 9.0-9.0.2.
Iwe une kusahadzika here nezvekuti sei download Cydia?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Dhawunirodha Cydia pane chero iPhone
Zvakachengeteka here kuisa iyo vhezheni? Izvo zvatove zvakaratidza kuti zvinoshanda mushe pa iPhone 4? Kana paine matambudziko, zvinogona kudzoserwa? kana iwe unofanirwa kumhanyisa jailbreak zvakare?
Yakaiswa uye inomhanya pane Iphone 4 ine IOS 5.0.1
Zvakanaka, ini handikwanise kutora iyo faira kurodha pamwe neya safari download maneja kana ne plugin, ndinofanira kuzviita kuburikidza shh?
Kana iwe usina kana dambudziko. Chandinoda kuti undibatsire ndechekuti ndotora sei cydia ye iPhone 5s, ini handizive nekuti panongova neshanduro 8. Ini ndinoda vhezheni 9.3.2, ndokumbirawo mundibatsire. Shamwari ???
Pindura kuna ccristhian
Ini ndakaiisa kunyange nyore, ini ndatumira iyo .deb faira kune iyo tsamba uye pandinoivhura ndakawana sarudzo ye "Vhura muIFile" 😀
Pindura kune ddlucido
Wakautumira kune iphone 4 ine 5.0.1 ???? Ini ndinotaura izvi nekuti kubvira pandakaisa kune iyo vhezheni, zvinongedzo zverudzi .zip, .rar kana, mune ino kesi .deb, zvinoratidzika kwandiri sediki diki rebhuruu icon ine mubvunzo chiratidzo, - risingazivikanwe faira - iyo isingatenderi ini "kuvhura ne…» Zvirongwa zvakaita seFile (zvandakaisa) Ndinoziva kuti handisi ndoga zvinoitika pane yake iPhone 4 (ine iPod inoita kunge iri kufamba zvakanaka), uye ndatsamwirwa nguva yakareba nemusoro wenyaya… Maita nekupindura 🙂
Dani barea akadaro
Unofanira kunge uine iFile, kana zvisiri, na de na… ndinoreva… 🙂
Pindura Dani Barea
Ini ndakazviitawo nekunditumira iyo faira kuburikidza netsamba. Sezvo iri kuti ddlucido iwe unovhura muIfile uye mukati iwe unopa iyo inosimudza uye ndizvozvo. Inoshanda nemazvo
Pindura kune ale6
Sezvandataura mumessage, KANA ini iFile yakaiswa; dambudziko nderekuti iyo email inogamuchirwa haindipe sarudzo yekuti "ndivhure ne ..." (sekunge zvaitika kwandiri neIOS 4.3.3) nekuti chiratidzo chete chisingazivikanwe chinowoneka panofanira kuonekwa rudzi urwu rwekubatanidza. Unogona here kundiudza kana mudziyo wako (wandinofungidzira kuti chinamato ichiita sezvakanaka) iri iPhone 4 ine 5.0.1? Ndatenda zvikuru 🙂
Unogona kunditumira iyo cydia kunyorera nepositi? Tsamba yangu iri marcelo_1988@hotmail.co.jp
Marce, kana iwe waiwana, iwe unogona kuitumira kune yangu email dagonoise@gmail.com Ndapota
Unogona kuona mutsauko mutoro pakati pa1.1.3 na1.1.4 (ndinoreva izvi) kana mutsauko uripo wechokwadi?
Zvinotaridza zvakawanda! Kubva pamasekonzi akati wandei (zvinova ndizvo zvaitora kana uchitarisa mapakeji zvichingodaro) kune vaviri kana 3.
Ndakaita zvese zvinotaurwa naGonzalo nhanho nhanho uye zvinofamba zvakakwana. Ndakagadzirisa Cydia kubva pa1.1.3 kusvika 1.1.4. Ini ndinoona kuti inoremerwa nekukurumidza uye inomhanya yakawanda mvura. Gonzalo uri muchina! Makorokoto nekuda kweichi posvo uye nezvose zvamunotumira pane peji zvakajairika nekuti zvinoita kuti hupenyu huve nyore kwatiri! Unoshanda chaizvo.
Nenzira, ini ndakakanganwa kutaura kuti ini ndakagadzirisa iyo Cydia kuenda ku1.1.4 paIphone 4 ine IOS 5.0.1. Zvese zvakanaka!
Uye zvinoitwa sei
Unogona kunditsanangurira here?
Ndakaitora mukombuta, uye neWinSCP ndakaipfuudza kune iyo iPhone kuburikidza neSSH. Mushure meizvozvo, naIfile ndakaivhura ndokuiisa inotevera. Ndakamhanya Cydia uye yakatooneka muna 1.1.4.
Ndakazviita netsamba uye ifile uye zvakashanda nemazvo
Nzira yakanakisa yekuisa mafaera aya ndeye kubva kudropbox
Mhoro uye unozviita sei, une application inokutora kubva ku safari kuenda kudropbox?
ine safari download download plug mairi haina kundipa kukanganisa
Pindura kuna ALFONS0
SHH? Ichave SSH ndinoti ...
Pindura kuna SPRMCH
Ndiregerere, ndanga ndichireva SSH!
Ine safari download plug mu, inondipa inotevera kukanganisa (Kurodha pasi kwakundikana. Haikwanise kugadzira dhairekodhi dhairekodhi) Ini handizive kuti chii chichaitika ini iFile yakaiswa, ini ndaedza kugadzira dhairekodhi nekuritumidza saizvozvo asi hapana.
yakaiswa uye yakakwana. Ndatenda
Uye kune 3G zvakakosha?
Pindura kuna odri
Mhoroi, ndine iyo iPhone 4 ine iOS 5.0.1 uye ini ndoda kutora iko kunyorera kuti irege kurodha zvakare repos pese pandinopinda Cydia (sezviri muvhidhiyo inotakura Cydia ichirova mukaka) pane chero munhu anoziva kuti zita rayo ndiani ? Ini ndoziva iyo NoCyfresh asi ini ndinongowana chete vhezheni dzeIOS 3 ne4.
Ngatione kana paine munhu anogona kundibatsira! Ndatenda!
Ini ndinokurudzira iyo AppCake application kuisa mafaira ne .deb yekuwedzera zviri nyore.
Yakanaka kwazvo iyi vhidhiyo Gonzalo, sekushandisa kwawakaita kwatiri.
Ndinokurudzira iyo yekuvandudza nekuti inotanga Cydia nekukurumidza kwazvo.
Ndakaipfuudza kune iyo Iphone 4 ine IFunBox uye Ifile
Dhaunirodha uye uchishanda zvakakwana !!! Thanks Gonzalo.
Gnzl Ini ndinotenda chaizvo mupiro wako, asi unogona kundipa ruoko nerangu chirevo pamusoro? Ini ndinoramba ndichivandudza repos uye mukaka unotora: (
Ini handina kana chakaiswa, ikozvino cydia inononoka nekuda kwekuburitswa kweiyo nyowani jeri, asi mumazuva mashoma zvichanaka futi.
Zvaive nyore kwandiri kuti ndiitumire iyo neemail.
Mhoroi, handina dhairekodhi rekutora mumugwagwa unoratidzwa? chii chandingaite? ndatenda
Ndatumirawo netsamba asi haindizarurire?
Ndekupi kwaunotora download safari download maneja mahara uye inoenderana neios 5?
Ndiri kuyedza kurodha pasi iFile kubva kuCydia uye haina kundisiya kubva kune chero chinhu, ndiri kuyedza kugadzirisa zvinhu zvitatu zvandinowana (activator, corona uye sbsettings) uye hapana chinotorwa chero, zvinoita here kune chero munhu? Izvo hazvizove zve megaupload nyaya uye handizvo? ivo vari kuibvisa kubva kumaseva kana zvimwe zvakadaro
Kana izvo zvakafanana zvikaitika kwandiri, handigone kurodha chero chinhu kubva kuecydia mushure mekuisa iyo .deb ¬ ¬ chii chandingaite ??? Ini ndatoita kupuruzira uye kudzima iphone uye hapana ... uye parutivi hazvindichinje kubva pa1.1.3 kuenda ku1.1.4
Ndine dambudziko rakafanana, ini ndinoedza kurodha pasi iro faira uye zvinondiudza kuti kurodha pasi kwakatadza kukwanisa kugadzira dhairekodhi. ndine safari download plugin uye ifile. Zvandinogona kuita?
Grax gonzalo ndakaitumira kuburikidza neemail uye ndakaivhura na IFILE uye sekutsanangura kwawakaita muvhidhiyo, yanga yatokwana, ndakaiyedza uye yakakwana kubva kuMexico, ndatenda nemupiro
asi mu cdma iphone yandinayo, haina kundipa sarudzo, ini ndinowana atachment sebhuruu sikweya, pasina sarudzo yekuivhura nayo ,,, ndoitei pano? maererano
Musoro75) 8 akadaro
Mazhinji ndinotenda nekuda kwezvose. Kushanda zvakakwana pane iPhone 4. Iwe uri muchina
Pindura kuna Cabe75) 8
Ndatenda zvikuru, Gonzalo…. !!
Inoshanda zvakakwana pa iphone 4 32gb ine IOS 5.0.1, inotumirwa kune tsamba uye yakavhurwa yakanangana nefile 1.6 nekutevera mirairo kubva muvhidhiyo.
watsemuka ... !!
Pindura kune ciberscorpion
Kutenda namesake, kurodha pasi faira, yakapinda kuburikidza nessh uye yakakwana
Ndine dambudziko shoma, ndinotora pasi faira asi kana ndikaenda kuIFile uye kukero yaunotaura, handisi kuwana Dhairekodhi dhairekitori
Pindura kuna Norber
Ini ndichangoisa pane iphone 4 ine ios 5.0.1 asi ndinofunga zvinotora nguva shoma kutakura kupfuura nakare.
Ndakazviisa sezvazviri muvhidhiyo. Ndatenda zvikuru nebasa renyu ..
Izvo hazvishande kwandiri kana, ini ndine zvese zvakaiswa: iFile, safari download pug in. Neemail haina kuziva iyo faira uye kubva kuhotera ini ndinowana iko kukanganisa kwakataurwa kare. Pane mumwe munhu angandibatsira here ???
Mhoro munhu wese anokupa iko kukanganisa ndapota ita zvinotevera. Izvi ndizvo zvandakaita uye zvinoshanda, iwe unongofanirwa kuburitsa SAFARI KUSVIRA MANAGER kana SAFARI DOWNPLUG. Kune izvi, tumira iyo faira yaunoburitsa pano kuemail yako uye mu safari vhura yako email account uye tinya pane yakanamatira faira uye IZVO IFILE ichavhura! 🙂
Kana ikandishandira, ini ndatova necydia 1.1.4, ini handizive dambudziko ripi rainowana mu var / mobile / librar / downloads dhairekitori nekuti haina kuonekera kwandiri futi. Pandakavhura iyo faira kubva ku safari ne IFILE inowoneka mune imwe folda. Zvakanaka, ndinovimba zvinobatsira kwauri.
Kuitwa uye kushanda, ndinokutendai zvikuru Enrique.
Inowanikwa mune ipi folda, nekuti ini handisi kuwana iyo faira
Ndatenda zvikuru Gonzalo! Ndakazviita zvakafanana nezvakaitika muvhidhiyo uye yakaenda zvakakwana! =)
unogona kugadzirisa pa iphone 3g?
Mhoro, kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuve uine jailbreak kare? Ndiko kuti ndine Iphone 4 vhezheni 5.0.1 yakavandudzwa netsika firmware nekuti ini ndaisada kurodha baseband sezvo ini ndichishandisa gevey, ndakaita iyi tsika firmware ne redsnow asi ini handina jailbreak uye ndinoda kuziva kuti ndinogona sei zviite, ini ndakabatikana. Ngatione kana paine munhu anondibatsira ndapota, ndatenda
Pindura kuna dikibella
Mhoro, mubvunzo, iyo cydia inogadziridza inoshandawo kune iphon 3g. waita hako
Mhoroi, iyi yekuvandudza inoshandawo kune iphone 3g
Ndine iPhone 4 uye kana ndichiita iyo jailbreak inobvisa sarudzo yekumisikidza maakaundi emaimeri… unogona kundibatsira… maita basa
Norlan payan akadaro
Ndine ipnone 3gs ine ios 5.0.1 jailbreak iyo dzidziso yakandibatsira asi cydia haindibvumidze kuisa chero chinhu, chii chandingaite? ndipe sig. meseji (yaisakwanisa kuitisa pre-inomirira dpkg yemainurses pamwe kutenderera kwekutenderera
Pindura Norlan Payan
Asi pane iphone 4 uye ios 5.01 inoshanda zvakakwana?
ndatenda, mucydia inondiisa vhezheni Cydia 1.1.6.
dzidziso yekuti yekupedzisira haisi 1.1.5?
Ini ndinowana chinhu chakafanana newe jjsm02 Ini handizive kuti mutambo upi uyu XXDD
Kwete. Ndiyo 1.1.6.
Kuvandudzwa pasina matambudziko. Thanks vakomana.
Yangu iPhone 4 inomhanya cydia 1.1.6, ndinokumbira kujekeswa. Thanks 😷
Kukanganisa 512 kunogadziriswa sei? Iphone 4 muna 5.1.1
Izvo hazvishande kwandiri izvozvi hazvivhure cydia muIOS 5.1.1…. Chero nzira
Pindura kuna Osier5
Zvakanaka, ini ndine Cydia 1.1.6, ndizvo zvandinowana ... ndine iyo iPhone 4s iOS 5.1.1 Zvinoita here? Ndozvandinoudzwa naCydia pazasi
Ini ndinodzika pasi kuti ndiiise pane yangu ipad 2 ine 5.1.1 uye ini ndinoona kuti iyo vhezheni yandatove ndakaisa yakafanana 1.1.6 inoitika kune vamwe vatinoshanda navo. uye mune yako posvo iwe unotaura nezvekuisa 1.1.4, munhu anogona kujekesa iyi poindi kwandiri?
Yekupedzisira iri 1.1.8, unayo pane kavha
Ndinokutendai, ndiri kuenda kunotevera dzidziso.
Ini ndakazviita uye izvozvi hazvivhure Cydia, ndinozvigadzirisa sei?
Ndine 1.1.6 pane iphone 4 ine 5.1.1
Pindura kune tariro yegreen
Hei ita zvese zvaanotaura neiyo ifile nessh uye aora cydia haivhure ndinoimisazve uye haina kuenderera isina kushanda iyo yapfuura ndibatsireiwo
Pindura kuna Nico_sb_10
Ini handina cydia yakaiswa, uye handizive kuti ndoiisa sei. Kana ndikachiisa zvakananga iyi yekuvandudza ichashanda ????
Izvi zvakaoma handina cydia uye ndinoda kuitora iyo iPhone 4
Ini ndoda kurodha cyria uye ini handigone senge yapfuura kuti vasandibhadharise
Chii chinonzi cydia uye ndechei?
iker fernando martinez negrete akadaro
Ini handikwanise kuiisa ndine iyo iPad 3 iOS 6.1 rubatsiro !!!!!
Pindura kuna iker fernando martinez negrete
Luis A. Rondón Paz akadaro
haishande, ini ndango kurodhaunirodha zvakananga ku iphone yangu uye hapana kana chinhu, zvinondiudza kuti haina kutsigirwa ...
Pindura kuna Luis A. Rondón Paz
ahh iyo Ifile yandaisa haina zvainoita uye imwe yandakawana inofanirwa kubhadharirwa, ndakakangwa 🙁
Ndatenga ndikabhadhara cydia uye haina kundipa sarudzo yekuisa. Saka ndakarasa mari here? Zvandinoita?
Iyi vhezheni inoshanda yeIPhone 3g…?
Inogona here kutorwa pasi paIpod Kubata?
Ini handikwanise kuitora pano yakawanda yakaoma kwazvo kurodha cydia ba yakawanda
Pindura kuna Wesley
Mhoro mubvunzo, ndine iphone 3gs ine jailbreak, asi dzima cydia kubva kudesktop ndinofanira kuitei ??
Johana Jatib Madrid akadaro
Ndakaedza kurodha cydia sekutaura kwako asi zvinoti safari haikwanise kuitora, ndoita sei ??????????
Pindura Johana Jatib Madrid
Ini handisi kuwana maitiro ekurodha pasi Cydia yeiyo nyowani vhezheni 6.1.3 ... unogona kundibatsira ... thankssss
Ini handisi kuwana iyo Cydia muApp Store
Pane mumwe munhu angandibatsira here ?????????
Ngatione, benzi iri rine mvumo yekutuka munhu anobvunza?
ndeipi nyowani vhezheni yecydia uye neiyo ios iri complatibe?
ndokumbira unditaurire kuti ndizive
uye chii chinoitika kana ndikaisa iyo iOS 7 kune iphoen 4s ine iyo cydia (iOS6.0 / Cy 1.1.8)
Kiero install chengeta yangu iPhone 4 k haishandisi SIM kadhi
Ini ndinoda cidya asi ini handina zano rekuti ndingaitora sei
Ndine iphone 5 ii saka ndinoda cidya ii handizive kuti ndoitora sei
Juan Lacarra akadaro
Yangu iphone iri 4 uye iri 6.1.3 ndinotora sei cydia
Pindura Juan Lacarra
Grabiel Flores Calderon akadaro
Ini handina cydia uye ndinoda kuitora yeiyo iPhone 4… .Ndinoedza uye inotaura kuti safari haigoni kuikanda… .. Ndinoitora sei?
Pindura kuna Grabiel Flores Calderon
Alexis Moncada akadaro
Ndine iphone 4s uye handigone kurodha cydia! Ndapota
Pindura kuna Alexis Moncada
Ini ndoda kuona kana neichi chishandiso ndinogona kuisa mashure nekufamba ini ndine iPhone 4S
Handizive kuti ndotora sei Cydia zvakananga kubva ku iphone yangu
Mhoroi chokwadi ini handina kukwanisa kurodha sidia uye mumwe mubvunzo, ndinoita sei kurodha mumhanzi kune yangu iPhone yenguruve?
inoshanda ipod kubata 4
Bx khan akadaro
Ndiri kuda kurodha cidya asi handizive. Inogona kubatsira plezzzz
Pindura Bx khan
Izvo zvakaoma sooo kurodha pasi cydia !! uye ifile yaunotaridza handisi kuiwanawo !!!! : /
Mumwe munhu andiudze maitiro ekuisa cydia, ini handizive, ini ndatova nemaawa mashanu ndichiedza
Shamwari ini ndinoda rubatsiro rwako pandino dhawunirodha imwe peji, RUBATSIRO! kurudzira
Mhoro mudiwa wangu chirongwa checydia
Ini ndinopinda dhawunorodha link uye ini ndinowana isiriyo peji, server haina kuwanikwa: / Ini handikwanise kuikanda waaaa
Norlan perez akadaro
Pindura Norlan perez
Hei, iwe unoziva, ndiri kurova madziro, ndine zuva rese rekuedza kurodha pasi cid, uye ini ndakaiyedza x komputa uye hapana uye ndakaiyedza x sero asi yanga yakanyanya kuomarara. Mumwe munhu k anogona kuzviita nemaoko zvakafanana hazvina basa kana m mhosva ini ndoda cidya yekuisa iyo whatsapp ndapota tibatsireiwo ndinosiya nhamba yangu 9932839766
Wakanyarara fran icho chokwadi kuti iwe uchachiita
Asi rl wattsapp ndeye mahara hapana cydia inodiwa
Mumwe munhu anogona kunditsanangudza zvakanaka nei ndakaedza kuiisa uye ini ndisingagone
Pindura kune anabel
Ndine iphone 3g uye handina iyo ifile uye kwete maitiro ekuodhaunzira iyo cydia !! Pane munhu angandiudza zvekuita ??? PLZ !!!!! Handina whatsapp kana chero chinhu !!! Ndine shungu !! 🙁
Ndatumira netsamba uye haibude
Mumwe munhu andibatsire kuziva kuti ndinoisa sei iyo cydia uye ini ndinopererwa uye ini ndaisakwanisa kana iyo kmpu kana x chero ini ndine iphone 4
Ndiani anogona kuitumira kune yangu e-mail lfleo_@hotmail.com
Wow ndinogona jake mutambo
Muzukuru wangu akandisiira nharembozha yake iyo anoshandisa iPhone 4.2 muCalifornia uye handizive zvekuita kuimisa muColombia, zvijekese kuti vanondiudza kuti hurongwa haugone kushanda muColombia nekuti haugone kuvhurwa asi imwe vanhu vanondiudza kuti ndinofanira kuisunungura, ndinotenda rubatsiro rwenyu
Mhoroi, ndokumbirawo mundibatsire, ndine iyo iPhone 4 ine jailbreak (pangu), dambudziko nderekuti ndinodzima cydia x kukanganisa. Mumwe munhu anogona kundiudza kuti ndingaisazve sei
Unogona here kuudza maitiro ekuisa Cydia isina jailbreak?
Mhoroi, ndine iPhone yangu neJB muIOS 8, ndinoda kuimutsidzira kuIOS 9.xx asi ini handina kukwanisa kuigadziridza, iTunes yangu inondipa chikanganiso chekuti chikumbiro hachigone kupedzwa ...
Mubvunzo wangu ndewokuti, zvinokwanisika here kugadzirisa kune imwe vhezheni isiri yazvino?
Ini ndiri paIOS 8.x uye ini ndoda kumutsidzira kune iOS 9.2 iyo yandinofunga kuti ndiyo yekupedzisira inogona kuiswa jailbrekied ...
Mhoro Mario. Kana iwe wakaputsika, iyo chete nzira yekugadzirisa ndeye kudzoreredza ne iTunes. Kana ukadaro, iwe uchaisa iOS 9.2.1 (hapana imwe inogona kuiswa) uye hapana jailbreak inowanika panguva ino yeiyo vhezheni. Iyo yazvino vhezheni iyo inogona kuputswa jeri ndeye iOS 9.1, asi iwe haugone kuiisa nekuti Apple haichisiri kuisayina.
Ahhh…. Ndatenda pablo! Saka ndinogara kwandinenge ndiine JB! Handimbofa ndakasiya! Kumwe kukahadzika…
Ndine iphone 5 ios 8.4 ...
Mukushandisa kwemimhanzi, sarudzo yakasarudzika haioneke kana ndine maalbham akati wandei namuenzi mumwe chete, mushanduro dzakapfuura ndaive neiyi sosi uye ndaigona kuteerera zvimisikidzo kune mamwe maalbham nebhendi rimwe chete / muimbi.
Iri idambudziko rinongoitika kwandiri, iOS here kana kuti chii?
Ini ndaida kuivandudza kuti ndione kana mu ios9 yakagadziriswa asi ini handidi kurasikirwa neiyo JB
Mhoro zvakare. Ndiri pachokwadi handina chokwadi. Ini ndinorangarira kuti ichi kana chimwe chiitiko chakafanana chakadzoka mushanduro chakarasika. Ndinozvirangarira nekuti paive nekufambisa kweKufamba kwebasa kweizvozvo uye zvakamira kushanda kana vaburitsa imwe vhezheni.
Ini handikwanise kurodha cydia pane yangu iPhone, ndoziva unogona kundibatsira
Pindura kuna Yohan
Eduardo ernandez cortezano akadaro
Mumwe munhu anogona kundiudza maitiro ekuisa cydia mune vhezheni 9.3.1 nekafashoni mune yangu aphon6plus
Pindura Eduardo ernandez cortezano
gare gare ini ndinopindura
Mhirizhonga yepamutemo pamusoro pe "kukanganisa 53", magweta anopomera Apple